के लोगो प्रतीक बनाउँछ? Key कुञ्जी विशेषताहरू - Print Peppermint
के लोगो एक चित्र बनाउँछ? Key कुञ्जी विशेषताहरू
नोभेम्बर 28, 2019 | ब्रान्डिङ, लोगो डिजाइन, सुरूवात
एक Iconic लोगो को मुख्य विशेषताहरु
हामी सबैलाई नाइके, कोका कोला, र पेप्सीको लागि लोगोहरू थाहा छ जस्तो हाम्रो हातको झोला छ। तर के आइकनको लोगोको सिर्जनामा ​​जान्छ? फेला पार्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईंलाई थाहा छ त्यहाँ लगभग छन् 30 मिलियन साना व्यवसाय अमेरिकामा? यदि तपाईं एक सानो व्यापार मालिक हुनुहुन्छ भने, यसको एक चीजको अर्थ हुन्छ: धेरै प्रतिस्पर्धा।
संसारमा तपाईं कसरी भीडबाट अलग हुन सक्नुहुन्छ? ठीक छ, एउटा उत्तम तरिका भनेको आइकनिक लोगो सिर्जना गर्नु हो। तर यो गर्नु भन्दा सजिलो छ।
यहाँ आइकोनिक लोगोका characteristics सुविधाहरू छन् जुन तपाईले आफैंले बनाउने बित्तिकै कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ।
र सबैभन्दा पहिला, तपाइँको लोगो सरल राख्नुहोस्! यस तरिकाले, तपाईं यसलाई प्लेटफर्मको बिभिन्न विविधतामा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
यसकाे बारेमा साेच। म्याकडोनाल्डहरू र एप्पल जस्ता धेरै प्रख्यात लोगोहरू सरल र असम्भव छन्। र तिनीहरू सुपर सफल छन्!
जब लोगो सरल हुन्छ, सम्झन यो सजिलो हुन्छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईंले अहिले नै नाइक लोगो कोर्न को लागी मानिसहरूलाई भन्नु भयो भने, धेरै व्यक्ति सक्षम हुनेछन्! त्यो आइकनिक लोगोको चिन्ह हो।
अर्को, तपाईंको लोगो अद्वितीय हुनु आवश्यक छ। केवल किनभने यसको सरल यसको मतलब यो भीडसँग मिसाउनु हुँदैन। यसको सट्टा, यो फरक र यादगार हुनुपर्दछ।
अनौंठो हुने धेरै तरिकाहरू छन्, समावेश सहित:
टाइपोग्राफी को चलाख प्रयोग
एक बोल्ड वा चाखलाग्दो अवधारणा
नकारात्मक स्थानको एक अद्वितीय प्रयोग
र अरु धेरै। यी केवल केहि विचारहरू हुन्।
जे होस्, तपाईंको लोगो बनाउँदा, केवल एक मात्र अद्वितीय सुविधा समावेश गर्नुहोस्। यदि त्यहाँ अधिक छन् भने, यो जटिल र याद गर्न गाह्रो हुनेछ।
तेस्रो, तपाइँको लोगो तपाइँको उद्योग र लक्षित दर्शकहरु को लागी प्रासंगिक हुनुपर्छ। जब तपाईं आफ्नो लोगो देख्नु हुन्छ तपाईं अलमल्लमा पर्नुहुन्न।
यसको सट्टामा, तपाइँ सन्देशलाई अर्थ दिन र तपाइँको कम्पनीको उद्देश्यहरूसँग पign्क्तिबद्ध गर्न चाहनुहुन्छ।
तपाईंसँग मात्र छ सात सेकेन्ड तपाइँको लक्षित बजारको साथ पहिलो छाप पार्न। त्यसोभए निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको लोगो उनीहरूसँग सान्दर्भिक छ।
L. दीर्घायु: आइकोनिक लोगोको अर्को विशेषता
आइकनिक लोगोको अर्को विशेषता दीर्घायु हुन्छ। लोगोहरू जुन हामीलाई थाहा छ र प्रेम समय भर रह्यो।
लोगोको साथ सुपर ट्रेन्डी प्राप्त गर्न सजिलो छ, तर उत्तम व्यक्तिहरू लामो समयसम्म चलेका छन्। न्यू योर्क यान्कीज, कोका-कोला, वा पेप्सीको बारे सोच्नुहोस्।
जबकि उनीहरूसँग वर्षौंदेखि अपडेटहरू छन्, ती अझै पनि उनीहरूको मूल रूपसँग धेरै समान छन्। यसले तिनीहरूलाई तुरून्त चिन्न सक्ने बनाउँदछ।
आजको संसारमा, तपाईंको लोगो स्थानको एक विस्तृत विविधतामा प्रयोग हुनेछ। यो डिजिटल क्षेत्रहरूमा प्रदर्शित हुन्छ, तपाइँको वेबसाइटको रूपमा साथै टि-शर्ट वा टोपी जस्ता परम्परागत स्थानहरूमा।
यो बिलबोर्ड जस्तो विशाल केहि चीज भर्न पनि उडाउन सकिन्छ, र साना स्थानहरूमा कलम जस्तै वा एकमा प्रयोग गरिने छ। व्यापार कार्ड.
यी सबै केसहरूमा तपाईको लोगो राम्रो देखिन आवश्यक पर्दछ। सबै भन्दा प्रतिष्ठित लोगो यो सुपर राम्रो गर्छ।
यी पाँच सुविधाहरूले तपाईंलाई आइकनिक लोगो डिजाइन गर्न मद्दत गर्दछ। अब यो तपाइँको सुरू गर्न समय हो!
हाम्रो टीमको लागि सम्पर्कमा रहनुहोस् व्यावसायिक लोगो डिजाइन। हामी यहाँ छौं मद्दत गर्न!
Project १ Free नि: शुल्क ग्राफिक डिजाइन संसाधन तपाईंको परियोजना पप बनाउनका लागि
एउटा व्यापार कार्डमा के राख्ने: जानकारीको4टुक्रा तपाईं हुनु पर्छ →